बढ्दैछन गम्भीर बिरामीहरु, कसरी जित्ने कोरोना संक्रमण ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » बढ्दैछन गम्भीर बिरामीहरु, कसरी जित्ने कोरोना संक्रमण ?
बढ्दैछन गम्भीर बिरामीहरु, कसरी जित्ने कोरोना संक्रमण ?
कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि कुनै खालको लक्षण देखिएको छैन भने आत्तिन हुँदैन । अलिअलि लक्षण देखिएको छ भने पनि तनाव लिन हुँदैन भने अनावश्यक रुपमा औषधिको सेवन गर्न हुँदैन । केही दिनमा सामान्य खोकी र ज्वरो हराएर जाने भएकाले तनाव लिने र आत्तिने कारणले जोखिम बढ्नसक्छ ।